The Lake House (2006) | MM Movie Store
စာလေးတဈစောငျကွောငျ့ အခဈြတဈခုစတငျခဲ့ဖို့ ဘယျသူကမြှျောလငျ့ခဲ့မှာလဲ?စတငျခဲ့တဲ့အခဈြတဈခုကအခြိနျကာလကှာခွားနပေမေယျ့ နောကျဆုတျလိုကျဖို့က ခဲယဥျးလှနျးလှပါတယျ။ကိတျဆိုတဲ့ဆရာဝနျမလေးက ရကေနျဘေးကအိမျမှာနခေဲ့တဲ့အိမျပိုငျရှငျဟောငျးပါ။
သူ့နောကျမှာပွောငျးလာမယျ့ အိမျပိုငျရှငျအသဈဆီကိုစာရေးရငျး သူ့စာက လှနျခဲ့တဲ့နှဈနှဈကရကေနျဘေးကအိမျမှာနခေဲ့တဲ့ အတိတျကအဲလကျဈဆီကိုရောကျသှားပါတော့တယျ။စာတှအေပွနျအလှနျဆကျသှယျရငျးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြမိသှားပမေယျ့ဆကျသှယျစရာဆိုလို့စာတိုကျပုံးလေးပဲရှိတဲ့သူတို့နှဈယောကျရဲ့ကွားမှာ အခဈြဆိုတာအိပျမကျတဈခုလိုပါပဲ။
အတိတျက အဲလကျဈနဲ့ အနာဂတျက ကိတျ…ဘယျလိုပေါငျးစညျးဖို့ကွိုးစားမလဲဆိုတာစိတျဝငျတစားနဲ့ကွညျ့ရှုရမှာပါ ပရိသတျကွီးအတှကျ ယခုတငျဆကျပေးလိုကျတာကတော့အားလုံးရဲ့အခဈြတျော ကီနူးရိဒျနဲ့ ဆနျဒရာဘူးလော့တို့ရဲ့ စိတျကူးယဥျအခဈြဇာတျလမျးလေးပါ။
ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို သီခငျြးခြိုခြိုလေးတှနေဲ့ ကွညျကွညျနူးနူးခံစားခငျြတဲ့ ပရိသတျကွီးတှအေဖို့တော့….
စာလေးတစ်စောင်ကြောင့် အချစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့ဖို့ ဘယ်သူကမျှော်လင့်ခဲ့မှာလဲ?စတင်ခဲ့တဲ့အချစ်တစ်ခုကအချိန်ကာလကွာခြားနေပေမယ့် နောက်ဆုတ်လိုက်ဖို့က ခဲယဉ်းလွန်းလှပါတယ်။ကိတ်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်မလေးက ရေကန်ဘေးကအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ဟောင်းပါ။
သူ့နောက်မှာပြောင်းလာမယ့် အိမ်ပိုင်ရှင်အသစ်ဆီကိုစာရေးရင်း သူ့စာက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကရေကန်ဘေးကအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့ အတိတ်ကအဲလက်စ်ဆီကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။စာတွေအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်မိသွားပေမယ့်ဆက်သွယ်စရာဆိုလို့စာတိုက်ပုံးလေးပဲရှိတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာ အချစ်ဆိုတာအိပ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။
အတိတ်က အဲလက်စ်နဲ့ အနာဂတ်က ကိတ်…ဘယ်လိုပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရှုရမှာပါ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ယခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့အားလုံးရဲ့အချစ်တော် ကီနူးရိဒ်နဲ့ ဆန်ဒရာဘူးလော့တို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သီချင်းချိုချိုလေးတွေနဲ့ ကြည်ကြည်နူးနူးခံစားချင်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေအဖို့တော့….
Stranger (Season 2) ၊ အပိုငျး (၁၄)